Komii ebbifamtootaa fi deebii ministeera barnootaa "Gaaffin ka'e jennee wanti jijjiirru hin jiru" - BBC News Afaan Oromoo
Komii ebbifamtootaa fi deebii ministeera barnootaa "Gaaffin ka'e jennee wanti jijjiirru hin jiru"
Goodayyaa suuraa Barattootni sagantaa al-idilee Yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti akka hin qacaramne dhorkaman
Qajeelfamni ministeera barnootaa Yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti barsiisummaan qacaramu nu dhorkee jedhu ebbifamtootni dhaabbilee barnoota ol'aanoo sagantaa al-idilee.
Ministeerri barnootaa ebbifamtoonni digirii jalqabaa yookin lammaffaa sagantaalee galgalaa, sambattaniifi ganna barachuun xumuran, yunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti barsiisummaan akka hin qacaramne erga murteesse bubbuleera.
Yuunivarsiitiwwan biyyattii tokko tokko murtee kana cinaatti dhiisuun namoota sagantaa al-idileen ebbifaman barsiisummaan qacaruuf galmeessuu eegalanis, ministeerichi xalayaa dhorkaa irra deebiin yunivarsiitiwwaniif raabsee jira.
Barnoota digirii lammaffaa sagantaa galgalaan hordofee yuunivarsiitii Gondar irraa A.L.I bara 2009 kan ebbifame Yooseef Tasfaaye "qajeelfamni kun sababa quubsaa kan hin qabne dha, ulaagaan ministeerichaa sagantaa barnootaa osoo hin taane dandeetti qofa ta'uu qaba ture," jedha.
Barattoonni ciccimoon sagantaa al-idileen baratan osoo jiranuu baratoonni sagantaa idileen baratan garuu qabxii ol'aanaa hin qabne fayyadamoo ta'aa jiru jedha Yooseef.
Haala walfakkaatun sagantaa al-idileen digirii lammaaffaasaa kan barate dargaggoo Abrahaam Getaachoo "murteen ministeerichaa barnoota al-idilee kan busheessu dha," jechuun qeeqa.
Dhorkaan kun qorannoon kan deeggaramee fi sababa hedduu kan qabu ta'uu, Ministirri Deetaa Ministeera Barnootaa Dr. Saamu'el Kiflee BBCtti himaniiru.
Akka sababaattis qabxiin seensaa barnoota digirii jalqabaa fi hammeentaan sa'aati barattootni al-idilee baratan kan barattoota idileetiin gadi ta'uusaa kaasu.
Komii ebbifamtootni kaasaniif deebii yoo kennan, "Gaaffiin ka'e jennee wanti jijjiirru hin jiru" jedhu.
Goodayyaa suuraa "Gaaffiin ka'e jennee wanti jijjiirru hin jiru"
Qulqullina moo baay'ina?
Itoophiyaan biyya baankii addunyaa dabalatee dhaabbilee idil-addunyaa biroorraa damee barnootaaf maallaqa dolaara miliyoona dhibbatti lakka'amu yeroo yeroon argattu dha.
Haa ta'u malee baay'achuu lakkoofsa dhaabbilee barnootaan alatti sadarkaan qulqullina barnootaa biyyattii gadi aanaa ta'uusaa ragaaleen dhaabbilee idil-addunyaa kanneeni ni mul'isu.
Barsiisaan Yuunivarsiitii Walqixxee maqaan isaanii akka eeramu hin barbaadne tokko dhorkaan ministeera barnootaa kun qulqullina barnootaa gadi aanaa sagantaa barnootaa al-idilee waliin hidhata akka qabu BBCtti himaniiru.
Hojjettoonni 6,700 ragaa sobaan qaxaraman of saaxilan
Kunis barsiisotni barnoota sagantaa al-idilee yeroo hafaa isaanitti kan barsiisan waan ta'eef, barumsichi xiyyeefannoo gahaa argachuu dhabuu fi barattootni sagantaa al-idileen baratan hedduunis hojjechaa oolanii gara daree waan dhufaniif miira dadhabbiin barumsa hordofuu isaaniirra madda jedhan.
Akka ragaa ministeera barnootaatti barattoota waggoota lamaan darbaniif barnoota digirii jalqabaa barachaa turan keessaa dhibbeentaan 43 barnoota isaanii sagantaa al-idileen barachaa turan.
Barattoota ministeeri barnootaa ofii qacaruuf fedhii hin qabne kanneen, dhaabbileen biroo akkamiti qacaruuf fedhii qabaatu?
Afaan Oromoo fi Finfinnee: Atse Faasil irraa gara Jeneraal Taaddasaa Birruu